Bayern Munich Oo Burburisay Fortuna Düsseldorf, Lewandowski Oo Rikoodh Cusub Dhigay Iyo Natiijooyinka Kulamadii Dhacay - Gool24.Net
Bayern Munich Oo Burburisay Fortuna Düsseldorf, Lewandowski Oo Rikoodh Cusub Dhigay Iyo Natiijooyinka Kulamadii Dhacay
Kooxda kubadda Bayern Munich ayaa toban dhibcood ku qabatay hoggaanka horyaalka waddanka ee Jarmalka, kaddib markii ay 5-0 ku garaacday naadiga yar ee Fortuna Düsseldorf oo kusoo booqday garoonkooda.
Munich oo difaacanaysa horyaalka oo ay si xidhiidh ah ugu guuleysanaysay sannadihii ugu dambeeyey ayaa waxa guusha ay xaqiiqsatay qaybtii hore markii uu laacibka Dusseldorf ee Mathias Joergensen gool iska dhaliyey, mid labaadna uu u raaciyey difaaca reer France ee Benjamin Pavard u dhaliyey goolka labaad daqiiqaddii 29aad, mid saddexaadna uu u raaciyey Robert Lewandowski ka hor intii aan loo bixin waqtiga nashada.
Ciyaartan oo ay iska maamulanaysay Bayern Munich ayaa lagu kala nastay 3-0 ay guusha gacan kusii haysay kooxda garoonkeeda Allianz Arena lagu ciyaarayay, waxaana markii la iskugu soo noqday qaybta dambe mar kale dardarta sii kordhisay kooxda ka dhisan Bavaria oo uu Robert Lewandowski gool afraad u dhaliyey.
Difaaca orodka badan ee Alphonso Davies goolka shanaad magaciisa ku qoray, waxaana sidaas ay Munich ku heshay guushan oo siisay inay toban dhibcood oo nadiif ah ku qabato hoggaanka horyaalka.
Borussia Dortmund oo kaalinta labaad ku jirtay ayaa ciyaarteeda usbuucan Axadda berri la ciyaari doona SC Paderborn 07 oo ay marti u noqon doonto, waxaanay u baahan tahay inay guul ka keento si ay usoo yarayso farqiga tobanka dhibcood ah oo ay toddoba uga dhigto.
Xiddiga reer Poland ee Lewandowski ayaa ciyaartan rikoodh cusub kaga dhigtay horyaalka, waxaana loo diiwaangeliyey inuu goolal ka dhaliyay dhamaan 18ka kooxood ee horyaalka Bundesliga uu ka kooban yahay.
Weeraryahankan ayaa dhaliyey 43 gool 37 gool oo dhamaan tartamada ah oo uu u saftay kooxdiisa, waxaanu barbarreeyey rikoodhkiisii xili ciyaareedkii 2016/17.
Bayern Muncih waxay ciyaarta soo socota Sabtida usbuuca dambe safar ugu tegi doonaa Bayern Leverkusen taas oo guul ay ka helaan ay kaabiga u saari doonto inay ku guuleystaan horyaalka iyadoo kulamo badan ka hadhsan yihiin.
Hoggaanka horyaalka ayay Munich ku qabatay 67 dhibcood, waxaana kusoo xigta Borussia Dortmund oo 57 dhibcood haysata, Bayern Leverkusen oo saddexaad ku jirta, haysatana 56 dhibcood iyo RB Leipzing oo 56 haysata laakiin farqiga goolasha lagaga horreeyo.
Kulamadii kale ee maanta dhacay:
Mainz 05 0 – 1 Hoffenheim